Izixhobo ezinokufikeleleka kunye neRobust SEO
Sijonge iliso lethu SERPS.com okwethutyana ngoku. UMseki UScott Krager Usibonisile iinguqulelo zokuqala kwaye sichukumisekile. Sisebenzise isabelo sethu se Izixhobo zokubeka iliso kwi-SEO ngaphambili. Nangona kunjalo, I-SEO iyaqhubeka nokutshintsha… Kwaye izixhobo ezininzi azigcinwanga.
Iqela likaScott lilwamkele olu tshintsho kwaye ngenene luza nenkqubo eyahluke mpela… ngesakhono sokudibanisa ngokuthe ngqo kunye google Analytics, Ukubeka iliso kwizalathi zentlalo, ukulinganisa iimeko zovavanyo -Zonke ziyafikeleleka kusetyenziswa ujongano lomsebenzisi olucekeceke Ayisiyiqonga lokuqala nje eli, nangona… ii-SERPs ziya kukuvumela ukuba uvavanye nakwamanye amazwe nakwi kumazwe e-65!
UScott walatha ezi zinto zi-4 zahlulahlula iqonga:
yethu Uvavanyo lwe-SEO Umsebenzi ucocekile ngokwenene. 3 cofa kwaye unokuseta kuvavanyo lwe-SEO ukuze ubone ukuba yintoni esebenzayo nokuba yeyiphi engekho kwisithuba sakho.
Amagama ethu aphambili emihla ngemihla adityaniswa ngokuqinileyo kunye google Analytics ke ungabona ngokujonga nje ukuba ziziqhamo ezixhonywe kancinci kuwe nangaluphi na usuku.
Ideshibhodi ikuvumela ngokukhawuleza ujikeleze iisayithi kwaye wenze uvavanyo olusisiseko lwezempilo kwindawo nganye. Kuhle ukuba ulawula iisayithi ezininzi.
yethu umbono wenqanaba lephepha kukuvumela ukuba ubone ngokulula ulungelelwaniso phakathi kwamanqanaba, ukugcwala, kunye neemetwork zentlalo kwitshathi engenzi gazi lamehlo.
Nantsi imbonakalo ye-SERPs ezayo ye-SEO yokujonga amanqaku edeshibhodi kunye nokusebenza:
Ngelixa uninzi lwezicelo ezikhoyo phaya zibiza amakhulu okanye amawaka ngenyanga, ii-SERPs iqala kwi- $ 9 ngenyanga… Ixabiso elinokuthengwa nayiphina intengiso (kwaye kufuneka ilisebenzise). Eyona phakheji yabo inkulu ikuvumela ukuba ulandelele amagama aphambili ayi-1,000 5,000 kumaphepha ayi-98 nge- $ XNUMX ngenyanga… hayi kakubi. Qala eyakho Uvavanyo lweentsuku ezili-14 ngoku!
tags: i-google analyticsSEOukubeka ilisoiqongaUvavanyoIsixhobo seozixhoboiiserps
Ukuqwalaselwa kweQhinga leSelfowuni
Juni 6, 2012 ngo-4: 54 AM
Abahlobo baka-Yaa kuyinyani ukuba uGoogle Analytics sisixhobo esihle se-seo kunye nesixhobo seWebmaster